Search Term: မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း , 13 results have been searched, Search time: 0.013 seconds , Sorting Option: Match level Published Date Subject Title Author Call No. Borrowed Times Renewal Times Volume No. Sort by: Desc Asc Hide Navigation | Hide trend diagram
NL Yangon (8)
နိုင်ငံရေး၊ငြိမ်းချမ်းရေး၊စစ်ပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ရေးသားထားသည်။ABSDF ၊NLD စသောအတိုကောက်စာလုူံးများ၏စကားရပ်အပြည့်အစုံကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသည်။ (2)
အာသာဂျော့၊ ချားလ်ဖိလစ် (2)
ဂါဂါ၊လေဒီ-အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ဘရိုင်ယင်၊ကိုနန် အ်-အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ဘီဂလို၊ကက်သရင်း-အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ပက်တီဆန်၊ရောဘတ်-အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ကတ်ချာ၊အက်ရှ်တွန်-အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ကောလင်း၊ စူဇန်-အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ဆွစ်ဖ်တ်၊တောလာ-အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ဟဲရစ်၊နီးလ် ပက်ထရစ်-အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ လင်ဒါလော့ဖ်၊ဒါမွန်း-အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ကျူစ်၊ကာလ်တန်-အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ပရင့်စ်-အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၊ မစ်ရှ်လ်၊လီယာ-အတ္ထုပ္ပတ္တိ (1)
ဆီးပန်းနီဆရာတော်၊ တောင်ဘီလူးဆရာတော်၊ တောင်ခွင်သာသနာပိုင်ဆရာတော်၊ ရေစကြိုဆရာတော်၊ ရှင်နန္နဓဇ၊ ဦးဇောတာဘိဓဇ၊ ရှင်စက္ကိနွာစရိ၊ ဦးပညာ၊ ဦး​ေ၀ဿ၀ဏ္ဏ၊ ဘားမဲ့ဆရာတော်၊ ဦးစာရိန္န၊ ၀ဏ္ဏကျော်ထင်ဗိသုကာဆရာဆိုင်၊ ရွှေမော်စွန်းကျောင်းဆရာတော်၊ ရွှေရေးဆောင်ဆရာတော်၊ သံယုတ်ဆရာတော်၊ ရှင်သုမေဓာ၊ စိန်တုံမိဖုရား၊ သီလရှင်ဖွားဦးစွန်း၊ စလင်းစုဖုရား၊ မိုင်းနောင်စုဖုရားကြီး၊ မြောင်လှမြို့စားမင်းသမီး၊ ဒေါ်စန္နာမာလာ၊ ဒေါ်ခေမာစာရီ၊ မ၀ဏ္ဏ၀တီ-အတ္ထုပ္ပတ္တိ (1)
ဖရိုဒ်၊ဆစ်ဂမွမ်၊ ကွန်းရက်ဂျိုးဆက်၊ ယိစ်၊ ဝီလျှံဘင်တာ၊ မန်းသေးမတ်စ်၊ ဗာဂျင်နီးယား၊ ဒီအိပ်လော့ရင်၊ တီအက်စစ်အီးလီးယော့၊အိုင်ဆက်ဘေယဲလ်၊ ဘားတော့ဘရက်၊ဖီဒရီကိုဂါစီယာလော်ရကာ၊ယွန်ပေါ-ဆာ့တ်၊ အဲလ်ဘတ်ကမူး၊ ဂျော့လူဝီဘော်ရက်၊ဂါစီယာမားကွက်ဇ်၊ အက်ဒရီးယင်နီရစ်ချ်၊ မီလန်ကွန်ဒရာ၊အက်သောဖူးဂတ်၊ဂျိုက်စ်ကာရြိးအိတ်စ်၊ပီတာဟန်ကီ (1)
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း- ထိန်းသိမ်းခြင်း (1)
အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၂။ မောင်းကွတ်ဘုရင် ၃။ ချူလာလောင်ကွန် ၄။ ဘူမိဘောအဒူလျာဒက် ၅။ ဟီရိုဟီတို၆။ သီဟာနု၊ နိုရိုဒွန် ၇။ နေရူး၊ ဂျဝါဟာလာ ၈။ အလီဂျီးနား၊ မိုဟာမက် ၉။ ဆွန်ယက်ဆင်၊ ဒေါက်တာ ၁၀။ မော်စီတုန်း ၁၁။ တိန့်ရှောင်ဖိန် ၁၂။ ဟိုချီမင်း ၁၃။ လီကွမ်ယူ ၁၄။ ဂန္ဒီ၊ အင်ဒီရာ၁၅။ အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်ချုပ် ၁၆။ ဘူတို၊ ဘနာဇီ (1)
အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်- အတ္ထုပ္ပတ္တိ ; စံ၊ ဆရာ၊ ဂဠုန်- အတ္ထုပ္ပတ္တိ ;ဟန်နီဘော-အတ္ထုပ္ပတ္တိ ; ဟိုချီမင်း- အတ္ထုပ္ပတ္တိ ; အာနက်စတို ချီဂွေဗားရား- အတ္ထုပ္ပတ္တိ၆။ မော်စီတုန်း- အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၇။ ဂျူးလိယက် ဖူးချစ်-အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၈။ ရီဇော်၊ ဟိုဆေး- အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၉။ ဗက်သွန်း၊ နော်မန်၊ ဒေါက်တာ- အတ္ထုပ္ပတ္တိ (1)
ချိန်၊ ဆရာ (ပဲခူး) (1)
ဆရာချိန် (ပဲခူး) (1)
မြန်မာပြန်သူ အောင်ထိပ် (1)
သန်းနိုင် (ရွှေရောင်လင်း) (1)
အောင်ထိပ်၊ မြန်မာပြန်သူ (1)
Total2pages First Page <Prev 12Next > Last Page>>
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့်အရည်အသွေးဖြင့်သီချင်းဖန်တီးခြင်း: Music on Mobile Already borrowed 8 times. Ordering
Publisher: သင်းစာပေ Published Date: 2014
Literature Type: Books , Call No.: ၀၀၆.၅ သန်း ၂၀၁၄/၁၃၀၆
Publisher: ပန်းမျိုးတစ်ရာစာပေ Published Date: 2009
Literature Type: Periodicals , Call No.: 000 ချစ်၂၀၀၉/၈၃၉
Publisher: Magic world entertainment Published Date: 2017
Literature Type: Books , Call No.: 621.385 မို ၂၀၁၇/၃၆၉၂
သင့်လုပ်ငန်းကိုအဆင့်မြှင်တင်လိုက်ပါ: Level up your business Ordering
Publisher: နိုင်နိုင်မိုးစာပေ Published Date: 2019
Literature Type: Books , Call No.: ၀၀၄.၆၉ သက် ၂၀၁၉/၇၇၁
Publisher: လမ်းပြကြယ်စာပေ Published Date: 2020
Literature Type: Books , Call No.: 923.1 သန်း ၂၀၂၀/၂၅၅၈
Literature Type: Books , Call No.: 923.1 သန်း ၂၀၂၀/၂၅၅၉
Author: အောင်ထိပ်၊ မြန်မာပြန်သူ
Publisher: ပြည်သူ့ဘဝဂျာနယ်တိုက် Published Date: 2020
Literature Type: Books , Call No.: 928 မော် ၂၀၂၀/၈၉၈
ကုန်းဘောင်နွယ် သာသနာ့၀န်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များ Ordering
Publisher: သူရိယစာပေ Published Date: 2009
Publisher: လင်းလင်းစာပေ Published Date: 2008
Publisher: ရွှေနဒီစာပေ Published Date: 2017
Literature Type: Books , Call No.: ၃၂၀.၉၅၉၁ မောင် ၂၀၁၇/၄၄၅